EPL: Chelsea oo xaaqday kooxda Stoke City, xilli ay gaartay guusheedii 13-aad oo xiriir ah… + SAWIRRO – Gool FM
EPL: Chelsea oo xaaqday kooxda Stoke City, xilli ay gaartay guusheedii 13-aad oo xiriir ah… + SAWIRRO
(London) 31 Dis 2016 – Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa guul wayn garoonkeeda Stamford Bridge kaga gaartay naadiga Stoke City, iyadoo sii dheereysatay guulaheeda xiriirka ah ee horyaalka Ingiriiska.
Chelsea ayaa goolka la horreysay waxaana 34’daqiiqo qeybtii hore madax ugu dhaliyey Gary Cahill, kaddib karoos uu dhanka kooranada ka soo qaaday Cesc Fabregas, Blues oo ciyaarta 1-0 ku hoggaaminaysa ayaana la kala nastay.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay kooxda Stoke ayaa la timid goolka barbaraha, waxaana u dhaliyey 46’daqiiqo Bruno Martins, kaasoo kulanka ka dhigay barbaro 1-1.
Blues ayaa markale ku soo laabtay hogganka ciyaarta waxaana gool caaqibo lahaa u dhaliyey 57’daqiiqo Willian, kaddib caawin uu ka helay Eden Hazard, kulanka ayaana sidaas ku noqday 2-1 ay ku gacan sarreysay kooxda martida loo ahaa ee Chelsea.
Kooxda Stoke City ma rajo dhigin ciyaarta ayeyna markale barbareeyeen waxaana goolka barbaraha u dhaliyey 64’daqiiqo Peter Crouch, kaddib markii uu dhammaystiray kubbad uu dadab ka soo dhigay Mame Biram Diouf, ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay barbaro 2-2.
Hal daqiiqo kaddib goolkaas barbaraha ee uu dhaliyey Crouch, Chelsea ayaa la timid goolka saddexaad oo ay hoggaanka ku qabteen waxaana weerar daba marayn ah oo ay qaadeen u dhaliyey markale 65’daqiiqo Willian, kaddib caawin uu ka helay Fabregas, Blues ayaana hoggaanka ciyaarta ku qabatay markale 3-2.
Kooxda Chelsea ayaa goolka afaraad ee ciyaarta la timid dhammaadkii ciyaarta, waxaana 85’daqiiqo u dhaliyey weeraryahankooda Diego Costa, markii uu xambaarsaday mid ka mid ah xiddigaha Stoke kaddibna kubbad daanta midig ka siiyey goosha, Blues ayaana ku adkaatay 4-2.
Kooxda Chelsea ayaa sidaas ku sii dheereysatay hoggaanka horyaalka Premier League, waxaana ay leeyihiin 49-dhibcood, dhinaca kalena waxa ay barbareeyeen rikoodhkii guulaha xiriirka ahaa ee Arsenal ay gaartay horyaalka kuwaasoo ahaa 13 guulo xiriir ah.
TOOS u daawo: Liverpool vs Manchester City - LIVE (Shaxda sugan)